सिल्टलले तपाईंलाई मास्टर वेब स्क्रैपिंग गर्न कुन कुशलताको बारेमा बताउँछ
यदि तपाईं आफ्नो अनलाइन व्यापार ईन गर्न को लागी डाटा खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईले केवल Google मा खोज डेटा इकट्ठा गर्न सम्भव छैन। कहिलेकाहीँ हामीले हाम्रो परियोजनाहरू प्राप्त गर्न केहि क्रिएलरहरू र डेटा स्क्रैपर्सहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ, र कहिलेकाँही हामीले हामीलाई आधारभूत क्षमताहरू विकास गर्नुपर्छ। यो सजिलो छ कि खोजी इञ्जिनले तपाईलाई के खोजिरहनु भएको पत्ता लगाउन मद्दत पुर्याउन सक्छ, तर तपाईलाई सफल हुनका लागी निम्न कुञ्जीहरु विकास गर्न आवश्यक छ।
1. रोबोट.txt फाइल पढ्न क्षमता
तपाईलाई ठीकसँग रोटोट.txt फाइलहरू पढ्न र सम्पादन गर्न सक्षम हुनुपर्दछ। यो फाइलले तपाईंको साइटलाई प्रायः प्राय: क्रलरलाई सीमित गर्न प्रयोग गरिन्छ। एकै समयमा, यसले तपाईंलाई तपाईंको स्क्रैप गरिएको डेटाको गुणस्तरलाई सहयोग गर्न मद्दत गर्दछ र मानव दर्शकहरूको लागि तपाईंको वेबसाइटको गतिमा सुधार गर्दछ। यही कारण तपाईंले सिक्नु पर्छ कि रोबोट.txt फाइल कसरी सम्पादन गर्ने। जब तपाइँ यो फाईल ठीकसँग सम्पादन गर्नुभएमा, तपाईले खराब बटहरूबाट हटाउन सक्नुहुनेछ जुन खोज इन्जिनहरूको नियम र नियमहरू पालन गर्नुहुन्न। यसबाहेक, तपाईं एकै समयमा विभिन्न वेब पृष्ठहरू लक्षित गर्न सक्नुहुन्छ र उपयुक्त डेटा सजिलै हटाउन सक्नुहुन्छ।
2।.डेटा पूर्वाधार सेट अप गर्नुहोस्
डेटा पूर्वाधार सेटअप गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले सम्पूर्ण वेबसाइटबाट गुणस्तर डेटा अनलक गर्नेछ। उदाहरणका लागि, तपाईंले SQL, PHP, र अन्य समान भाषाहरू सिक्नु पर्छ किनकी तिनीहरूले राम्रो तरिकाले तपाईंको डाटाको आधारभूत संरचना कोयम राख्ने। SQL पहुँच प्रदान र डाटा पूर्वाधार सेट अप तपाईंलाई आत्म-सेवा विश्लेषक बन्न सक्षम बनाउनेछ, तपाईंलाई केहि मिनेट भित्र अधिक सटीक र राम्रो तरिकाले स्क्रैप गरिएको डेटा प्राप्त गर्न सक्नेछ।
3. एचटीएमएल, सीएसएस, र जाभास्क्रिप्टको आधारभूत विचार
4 Source . बोटहरू लेख्न र स्केल गर्न क्षमता
तपाईंले असल बटहरू र खराब बटहरू बिगार्न सक्षम हुनुपर्दछ। राम्रो बटहरूले तपाईंको वेबसाइटलाई खोजी इन्जिन नतिजामा क्रल गर्न मद्दत गर्दछ, तपाईंलाई राम्रो-संरचित र उच्च गुणस्तर डेटा प्रदान गर्दछ। अर्कोतर्फ, खराब बटहरू तपाईंको साइटमा हानिकारक छन् र तपाईंलाई राम्रो तरिकाले स्क्रैप गरेको डेटा प्राप्त गर्नुहुँदैन। तपाईं केवल राम्रो बुटहरू र खराब बट दुवै विभेद गर्न आवश्यक छैन तर तपाईँले बोट लेख्नु र माप्नु पर्छ। तपाईंले ध्यान दिनुपर्छ कि कम्प्युटरहरू र मानव अन्तरक्रियाको विकासमा अर्को चरण बटहरू छन्। यसको मतलब तपाईं बोट्स बारे जान्दछन् र नियमित रूपमा तिनीहरूलाई लेख्नुहुन्छ, उच्च गुणस्तर डेटा स्क्रैप गर्न र तपाईंको व्यवसायको फाइदा उठाउनको लागि संभावना हुनेछ।